"Donald" anotsvedza kupinda muchinzvimbo cheanonyanya kushandiswa mapassword muna 2018 | IPhone nhau
Tiri kupedza gore uye isu tinotanga kudzokorora zvese zvakaitika mumwedzi gumi nemaviri iyi. Tichazosiya for gare gare kushanya kwenyaya dzese dzakapihwa naApple, kubva iOS 12 kusvika Nhepfenyuro dzeApple 4, kuburikidza neMacOS Mojave kana iyo nyowani iPad Pro.Rave riri gore rakanaka reApple.
Mune imwe tsinga, SplashData ikambani yakatsaurirwa kuchengetedza komputa. Gore rega rega rinotangisa runyorwa rwe 25 mapassword anonyanya kushandiswa. Chinzvimbo chegore rino 2018 hachina kusiyana zvakanyanya, asi kupinda kwemamwe mapassword akadai sa "donald" ayo anofungidzirwa kuve ane hukama naDonald Trump, mutungamiri weU.S. aripo, zvinoshamisa.
Iwe unoshandisa chero eaya mapassword? Chinja icho!
Iwo mapassword atinoshandisa mumasevhisi edu izvo zvakakosha sekushandisa kwatinoita maakaundi edu. Kuchengetedzwa kwekiyi kunofanirwa kuve kwakakwirira. Kwete chete kuchengetedza ruzivo rwedu, asi kudzivirira vabiridzi kubva mukuwedzera simba ravo nemamwe makiyi ekutamba nawo. Neichi chikonzero, makambani senge SplashData, izvo zvinoedza kuita kuti nzanga izive nezve kukosha kwekuve ne password yakasimba.
SplashData yakaburitsa chinzvimbo cheiyo 25 anonyanya kushandiswa mapassword muna 2018. Pasina imwezve ado, isu tinokusiira iwe iwo makumi maviri neshanu mazwi kana musanganiswa:
Kana tikaongorora rondedzero, tinoona kuti mamwe mapassword akadai se "123456" kana "password" anoramba ari panhandare yemapassword anonyanya kushandiswa uye nyore kuba. Nekudaro, zvine chekuita nerondedzero yegore rapfuura, password "123456789" inopinda munzvimbo yechitatu. Kunyangwe ichi chakareba kupfuura chekare, zvakango netsekana nekuti chinongoshandisa nhamba uyezve zvichiteerana.
Ndine urombo, Mutungamiri (Donald Trump), asi izvi hapana nhau dzenhema. Kushandisa zita rako kana chero zita senge password chinhu chakashata. Hackers vanobudirira pakushandisa mukurumbira, pop kana mazita emitambo kana keyboard mapatani ekuisa maakaunzi sezvo vachiziva kuti vashandisi vazhinji vanoshandisa aya mapassword nekuti ivo "vari nyore kurangarira."
Iko kupinda kwenzvimbo 23 yekiyi «Donald«. Zvinotendwa kuti zvine hukama naDonald Trump uye, sekureva kweSplashData, makanika uyu anokuvadza zvikuru Kune vashandisi. Kwete chete yekushandisa zita remutungamiriri wenyika, asi kushandisa chero zita kana zita remunhu chero ane mukurumbira, nekuti irwo ruzivo rwunogona kuiswa zvisirizvo ne database chete ine ruzivo urwu.
Chekupedzisira, sekurudziro, tinokurudzira kuti iwe uvandudze mapassword ako nguva nenguva, uchivapa chengetedzo yepamusoro. Kuti vaite izvi, vanofanirwa kuve vanopfuura mavara masere: mabhii (mabhii makuru nemavara madiki), manhamba uye zviratidzo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » Aya ndiwo mapassword anonyanya kushandiswa a2018
SECRET yaive yangu.
Makore mazhinji apfuura (ikozvino handizviite) ndakashandisa nzira kuti ndirege kuikanganwa. Ini ndakabvisa kana kuwedzera kuID yangu nhamba senge 4 kana 6, asi kune imwe neimwe nhamba. Saka kana ID yangu iri (ndinoigadzira) 13.324.563 uye ini ndikawedzera 3 kune ese angave ari 46.657.896 uyezve ndobva ndaisa mavara maviri akafanana, imwe pamberi uye imwe shure kwenhamba. Jajajajajajjajajajajaja